Sanad-Guuradii labaad ee Sept. 11, Siyaasadda Caalamku waa sidee?
Shalay ayeey aheyd sanad guuradii labaad ee dhacdooyinkii argagixisada lahaa ee lala beegsaday magaalooyinka New York iyo Washington ee lagu xasuuqay kumanaan dad ah oo wax eey galabsadeen la arag. Dhacdooyinkaasi waxeey ahaayeen kuwa ugu argagaxa badan taariiqda cusub. Wexeey kaloo ahaayeen kuwa loogu warqaadka badan yahay. Intaas waxaa ka sii daran dhibka dhacdooyinkaasi wuxuu si dawaali ah iyo si aan dawaali aheynba u wexyeeleeyey dhamaan lixda 6 billion ee qof ee dunida korkeeda ku dhaqan. Ka billow qofka eey qaraabadiisa soke, ama asxaabtiisa uga geeriyoodeen, ku gee beeraleyda ku dhaqan bariga fog ee laga jartay kaalmadii dowladda dhexe, dhaqaale xumo ka timid sept, 11 owgeed. Soo mar dadyawga caadiga ah ee diintooda darteed baqdimo la jiifan la'a.
Septemper 11, cidii doontaba haka danbeysee, wexeey musiibadeeda ugu badan soo gaarsiisay dadka muslinka ah ee tiradoodu korka u dhaafeyso 1.5 billion ee qof. Hadii eey muslimiini soo maleegtay argagaxa intaa le'eg iyadoo is leh muslinka kale u gargaara, Wexeey dhabtu tahay ineey kuwaasi geeysteen dhibkii ugu weynaa ee soo mara muslimiinta caalamka, taariiqdan casriga ah. Argagixiso qeyb kama ahan diinteena Islaamka ee xushmeynta iyo qadarinta ku qotonta. Marnaba geesiyaal iyo naftood hurayaal laguma tilmaami karo isbiimeeyayaal halaagay kumanaan aan wax eey galabsadeen la arag. Kuwaas oo isugu jira, Rag, Dumar, Caruur, Doqow iyo waliba kuwa Muslin kale ah. Diinteena muqaddaska ah meelna kagama taal in si axmaqnimo ah loo xasuuqo duul aan waxba galabsan. Sept 11 wexeey ahaan doontaa wajiga gabaxi! i ugu weynaa ee abid soo mara taariiqda Islamka casriga ah.
Siyaasadda iyo Dhaqaalaha
Saaxadda siyaasadeed ee caalamku wexeey u sii siqday silic iyo saxariir siyaado ah. Sept.11 wexeey amaamuday neceyb ama ugu yaraan shaki iyo mugdi soo kala dhex gala daris kala diin ah oo nabad kuwada dhaqnaa. Dhacdooyinkaasi wexeey sidoo kale aafeeyeen dhaqaalihii caalamka oo dhan. Ka soo billow dhaqaalihii diyaaradaha caalamka oo si aan caadi aheyn u hoobtay. Waxaa suuqa kabaxay oo kacay shirkado waaweyn oo eey kamid yihiin Swiss-air, Sabena iyo kuwa kalkaal dowladeed heybsaday sida; United iyo U.S Airways oo labaduuduba Mareykan ah. Dabcan dhaqaaluhu wuxuu salli goglan u yahay siyaasada caalam weynaha. Dowladihii deeq bixiyayaasha ahaa ee dunida weey ka dhaarteen ineey deeq danbe bixiyaan. Sept.11 wexeey horseeday laba dagaal oo Afghanistan iyo Ciraaq ka dhacay oo salfaday iyana boqolaal nafood oo aan waxba galabsan. Caalamka waxaa loo kala bixiyey (a) Argagixiso raac (b) Argagixiso diid. Ha! dii aad argagixiso raac noqotana, kuwii horeba meeshii u danbeeysay baa kuu danbeysa. Hadii kalena, Argagixiso diid iska noqo.
Dhaqanka iyo Diinta.
Sept.11 wexeey horseeday isku dhicii ugu weynaa ee xadaaradaha dunida. Waxaa shaashadaha laga arkay sawiro aan hore looga arag caalamka galbeedka oo eey kamid yihiin; Dumar ku xijaaban Burkada Afghanistan ee buluuga ah oo min madax ilaa iyo cirib qarsoon. Shaashadaha ayaa sidoo kale laga daawaday wadaado hodan ah oo ku dhex nool buuro dhagxaan ka sameysan. Sawiradani wexeey fajac iyo amakaag ku noqdeen caalam aan rumeysan karin xaqiiqda ka jirta caalamka kale. Waxeey Sept.11 isku furtay dhabayaal dhaqameedyo kala qoqobnaa, wexeeyna isu sahashay ineey diimo badani is bartaan. Tusaale ahaan, buugaagta looga hadlayo diinta islaamka iyo tafsiirka Qur'anka kariimka ah ayaa aad iyo aad looga iibsaday galbeed ka gadaal Sept.11. Iskaba daa in intaas lagu simee, waxaan ka daawaday mid kamid ah TV-yada Mareykanka kal hore, iyadii oo aayad Qur'an ah oo gooni kaligeed loo taagay inta afka qalaad Eglish-lagu beddelay lagu soo qora! y shaashada!
Sept.11, intaas kuma eeysan ekaane wexeey aheyd dhacdo sababtay in tiro aan caadi aheyni soo galaan diinta Islamka. Sida eey sheegeyso xarunta muslimiinta waqooyiga America "Tiro aan caadi aheyn ayaa yaqiinsaday diinta Islamka Sept.11 kadib". Nasiib xumo, Tiro aan caadi aheyn oo muslimiin ahna takoor iyo faquuq ayaa loo geystay Sept.11 kadib.
Culimada iyo Sept.11.
Culimaa'udiinka caalamka islaamka ugu waaweyni waa eey dhalleeceeyeen dhacdooyinkii Sept.11. Ha yeeshee Culimada xagga culuumta nafsiga ku taqasusay ayaa iyagu isku howlay ineey bal dhanka cilmu-nafsiga ka soo eegaan sababihii Sept.11. War cad oo is dul saaran lagama hayo. Culimada Islamku dhankooda wexeey inbadan iftoodeen ineey tahay xaaraam in dad aan waxba galabsan la laayo. Wexeey sidoo kale ka dhawaajiyeen ineey fulaynimo iyo baqdin tahay in magaca Islamka si gaadmo ah wax loogu laayo.
Isku soo duuboo, Sept.11 wexeey geysatay aafo iyo musiibo ka weyn xitaa middii loo maleynayey. Wexeey isku liqdaartay dunidii oo dhan. Isla markaana meysan gaarin muhimadii laga lahaa, waaba hadii muhimad laga lahaaye. Hadiiba Muhimad laga lahaa, Waxeey aheyd mid waxashnimo iyo doqonimo. Wexeey aheyd magac xumo usoo hoyatay caalamka carabta iyo kan Islamkaba. Wexeey keentay in hadii aad Muslim tahay maanta oo aad dooneyso inaad Airport uun diyaarad ka raacdo, si gooni ah il gooni ah laguugu eego. Mana ku eedeysna dhibanayaashu ineey sidaas sameeyaan, waayoo fal caqliga diidaya ayaa ku dhacay.
Dabcan, Siyaasad ahaan waad ku khilaafsanaan kartaa Mareykanka waxaad doonto, laakiin taa macneheedu ma ahan in isbiimeyn lagu jawaabo. Hadii leys weydiiyo, Sanad-Guuradii labaad ee Sept.11, Siyaasadda Caalamku waa sidee? Jawaab qayaxan looma heli karo. Ha yeeshee, waxaa lagu soo koobi karaa; Waa ka dar oo dibi dhal iyo furuq iyo daacuun. Dagaal, Argagax, Qarax, Dil, Dhac, Kufsi iyo Qas uun beey Sept.11 soo kordhisay.